DRDA Vakinankaratra – JICA : ampiharina ny voly vary Papriz | NewsMada
Miditra amin’ny dingana faharoa nanomboka ny taona 2015 ny tetikasa Papriz, fampiroboroboana ny fambolem-bary any amin’ny faritra Vakinankaratra. Manohana sy mizara fahaiza-manao ny amin’izany ny DRDA Vakinankaratra miaraka amin’ny Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Tany am-boalohany, tsy nisy afa-tsy mpamboly efatra monja ny nampihatra azy. Ankehitriny, fitaratra amin’io tetikasa io ny ao amin’ny lemaka Sahalombo mirefy 110 ha, ahitana mpikambana mpampisa rano 95, ka 89 amin’izy ireo mampihatra ny teknika Papriz.
Raha ny salanisa, araka ny fambolem-bary mahazatra hatramin’ny ela, manodidina ny 2,5 t /ha ihany ny vokatra azo. Avy amin’ity fampiasana Papriz ity, efa tafakatra 4,5/ha izany, ny sasany aza efa mahita 7t/ha, raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fari-piadidiana ny any ambanivohitra ao Antsirabe II, Andrianiaina Jacob. Mpamboly iray efa mahomby atao mizara ny traikefa sy ny fahombiazany any amin’ireo mpamboly hafa namany.
Anisan’izany Randrianiaina Bruno Claude, efa nampihatra ny Papriz nanomboka ny taona 2009. “Tamin’ny fomba fambolena teo aloha, 800 kg monja ny azoko amin’ny tanimbary 14 a. Rehefa natomboka ny Papriz, niakatra tsikelikely izany, 900 kg, 1 t ary tamin’ny fotoam-pambolena farany teo nisy 1,2 t”, hoy izy. Tany am-boalohany, tsy nampino azy loatra ny fampiasana zezika semika, izy efa zatra zezika composte izay misy rahateo.
Andrana amin’ny SA
Nanaovana andrana ny zezika Sulfate d’ammonium (SA), mora fampiasa sady mora vidy 1.200 Ar ny kilao, vokarin’ny orinasa Ambatovy eto an-toerana. Nilaza ny ao amin’ny DRDA Vakinankaratra fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana izy ireo, hahatakaran’ny tantsaha maro io SA io. Manana ny safidiny feno anefa ny tantsaha amin’ny zezika ampiasainy. Tsy nomen’ny tantsaha lanja loatra hatramin’izay ny fampiasana zezika amin’ny ankapobeny. Iray ihany ny asa vary fa ny teknika, samy hafa.
Fanofanana ao amin’ny CFMA
Mpiara-miombon’antoka amin’ity fanatsarana ny voly vary ity ny Centre de formation et d’application de machinisme agricole (CFMA) ao Ivory Antsirabe. Omen’io foibe io ny fanofanana sy fampiasana ireo fitaovana ao aminy. Fitaovana vitan’ireo manampahaizana indonezianina miara-miasa amin’ny Jica. Hita manaraka fiofanana ao amin’io toerana io ny mpianatra sy tantsaha. Miankina amin’ny fotoana fohy na maharitra hanarahana izany ny saram-piofanana.